नर्मल र सिजेरियन डेलिभरी कुन राम्रो ? - Everest Dainik - News from Nepal
नर्मल र सिजेरियन डेलिभरी कुन राम्रो ?
नर्मल डेलिभरीले यौन आनन्दमा कमी– भ्रम मात्र
२०७४, १८ कार्तिक शनिबार
सुत्केरी गराउने दुई विधि छन् । सामान्य डेलिभरी र सिजरियन सेक्सन ।
तर, दुवै विधिको मूल उदेश्य सहज रुपमा शिशुलाई संसार ल्याउनु हो । केही वर्ष अघिसम्म सामान्य अथवा नर्मल डेलिभरीबाट मात्रै सुत्केरी गराइन्थ्यो । यो विधिका कारण कतिपय अवस्थामा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमै समेत खतरा पुग्ने गथ्र्यो । तर प्रविधिको विकाससँगै सुत्केरी गराउने विधि पनि परिर्वतन भएको छ । आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने हुँदा धेरै गर्भवतीले सिजेरियना सेक्सनलाई जोड दिन थालेका छन् । तर यी दुवै विधिको आ–आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् ।
डा. मञ्जलीकुमारी यादव
नर्मल डेलिभरी प्राकृतिक र परम्परागत विधि हो । पृथ्वीको उत्पतिसँगै यो विधिको सुरुवात भएको हो । यो विधि अनुसार शरीरले सुत्केरी हुने अवश्यक वातावरण सृजना गर्दै पाठेघर खुल्ने र बच्चा जन्मिदाको पीडा आमामा महशुस गराउँछ । नर्मल डेलिभरी हुँदा अस्पतालमा धेरै समय बस्नु पर्दैन । कृत्रिम घाउ नहुँदैन । आमा बन्ने क्रममा प्रसब पीडा भए पनि प्रसब पछि पीडा कम हुन्छ । नर्मल डेलिभरी भएपछि आमाले बच्चालाई लगत्तै आफ्नो दुध खुवाउन सक्छन् । जुन बच्चाको लागि अमृत सरह हुन्छ । आमा र बच्चाबीचको सम्बन्ध झन घनिष्ठ गराउँछ ।
याे पनि पढ्नुस स्वास्थ्यका लागि सुन्तला खानुको १० फाइदाहरु यी हु्न्
तुरुन्तै एकले अर्काको श्पर्स पाउँछन् । नर्मल डेलिभरीमा थोरै रगत (५ सय एमएल) मात्रै जान्छ । यसमा कुनै भित्रि अङमा क्षति पुग्ने डर हुँदैन । तर, अपवातका रुपमा धेरै रगत जाने सम्भावना पनि हुन्छ । जसलाई पोष्टपार्टम ह्युमीरेज (पीपीएच) भनिन्छ । कहिलेकाहि बच्चा च्यापिएर अक्सिजनको कमी हुने बच्चालाई ब्रुजेल लाग्ने डर हुन्छ । जस्तो शरीर सुनिने आदी । नर्मल डेलिभरीमा पछि गएर आंङ खस्ने समस्या पनि देखिनसक्छ । कहिलेकाही जबरजस्ती साल तान्दा पाठेघर फर्कीन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा आमाको ज्यानै जाने सम्भावना पनि हुन्छ ।
सिजेरियनका फाइदा र बेफाइदा
सिजेरियन सेक्सन पनि दुई प्रकारका छन् । आकस्मिक र ऐच्छिक । ऐच्छिकमा बच्चा जन्मिनु अघि तर समय पुगि सकेको अवस्थामा आमाको पेट चिरेर बच्चा निकालिन्छ । यसो गर्दा आमामा तनाव र पीडा कम हुन्छ । आमालाई सबै कुराको तयारी गर्न र मानसिक रुपमा तयारी हुन प्रर्याप्त समय पनि हुन्छ । अर्काे आकास्मिक सिजेरिय विधि हो । यो विधिको प्रयोग गर्भमा भएको शिशुलाई अप्ठयारो परेको खण्डमा या आमालाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा गरिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस गर्मीयाममा ठेउलाको बढी समस्या
शिशुको मुटुको धड्कन कम वा बढी हुँदा, तौल धेरै हुँदा, प्रसवको समय चाहिने भन्दा बढी भएमा, आमालाई गाह्रो पर्दा वा कुनै जटिल रोग हुँदा गरिन्छ । आकस्मिक सिजेरियन गर्दा आमालाई बेहोश बनाइन्छ । पूर्णत बेहोस नगराई पेटदेखि तल्लो भाग मात्रै बेहोश बनाउने गरिन्छ । आमाले बच्चा निस्केको हेर्न सक्छिन ।
सिजेरियन वा शल्यक्रिया गरी शिशु निकाल्दा संक्रमण हुने, धेरै रगत जाने, औषधिको एलर्जी हुने, भित्रि अंगमा चोट लाग्ने र बेहोश बनाउँदा समस्या देखिन सक्छ । एसटीडी, एचआइभी र एचपीआर भएका आमाबाट बच्चामा सर्ने रोगको न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । जुन नर्मल डेलिभरीमा बढी हुन्छ । पेनिक फ्लोरको चोट पनि कम हुन्छ । नर्मलमा भन्दा बढी सयम अस्पताल बस्नुपर्ने हुन्छ । शल्यक्रिया गरेको घाउ निको हुन समय लाग्छ ।
याे पनि पढ्नुस बढी गुलियो खाँदा स्वास्थ्यमा पर्ने ६ बेफाइदा यस्तो छ !
गर्भवतीले प्रसव पीडाका डरले सिजेरियन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । जुन गलत हो । कतिपयमा नर्मल डेलिभरी गर्दा यौन आनन्दमा असर गर्छ भन्ने भ्रम पनि छ । त्यो कथाचित सत्य होइन । बच्चा जन्मे पछि केहि समयमा यौनाङ पूर्णत पहिलेकै रुपमा आउँछ । त्यो भ्रमले अपे्रसन गराउनु राम्रो हुँदैन ।
तर अवश्यकता अनुसार शल्यक्रिया भने गर्नुपर्छ । नत्र आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । शल्यक्रियापछि सोही अनुरुपको खानपानले आमालाई छिट्टै सन्चो बनाउँछ । (स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा यादव टाइम्स हस्पिटल, रंगेली, मोरङ्गमा कार्यरत छिन् ।)
आईपीएल : दिल्ली र केकेआर खेल्दै, सन्दीपले मौका पाउने सम्भावना कति?
गर्भपतनसम्बन्धी नयाँ कानुनविरुद्ध पोल्याण्डमा विशाल प्रदर्शन
आज महाष्टमी, राज्यका तर्फबाट ५४ बोका र ५४ राँगाको बलि नदिइने